XRP (XRP) In Leu Moldova (MDL) qiimaha sicirka
Sicirada sarrifka lacagaha oo casriyey 18/01/2020 23:00
XRP In Leu Moldova qiimaha dhabta ah, qiimaha sarrifka online on suuqyada lacagaha suuqyada.
XRP qiime ahaan Leu Moldova maanta 18 January 2020
23:00:23 (cusbooneysiinta qiimaha ee 58 Seconds
1 XRP = 3.93 MDL
1 MDL = 0.25 XRP
Cryptoratesxe.com - suuqa sarrifka ugu weyn. Xariirka isweydaarsiga 'Cryptoratesxe.com' ee 1 XRP waxaad u baahan tahay inaad bixiso 3.93 Leu Moldova). Eeg XRP sicirka sarrifka 30 ilbiriqsi kasta. Wuxuu soo bandhigayaa XRP ilaa Leu Moldova heerka sarrifka daqiiqaddii.
XRP In Leu Moldova shaxda ku nool 18 January 2020
Websaydhka waxaad ka heli kartaa shaxanka XRP to Leu Moldova sicirka sarrifka dusheeda 18 January 2020. Shaxanka kor ku xusan waa muuqaal muuqaal ah oo ah XRP to Leu Moldova. Isbeddelka heerka sarrifka ayaa isla markiiba lagu arki karaa shaxda. U adeegso jiirka si aad u doorato waqtiga saxda ah ee shaxanka oo aad u ogaato XRP sicirka sarrifka ee Cryptoratesxe.com waqtigan.
Beddelaan XRP In Leu Moldova
XRP (XRP) In Leu Moldova (MDL) Heerka Sarrifka
XRP (XRP) In Leu Moldova (MDL) shaxda qiimaha taariikhda
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Moldova xilligan
Isweydaarsiga daqiiqad kasta boggayaga internetka. 0.0034 MDL - isbedelka XRP (XRP) ilaa Leu Moldova qiyaasta daqiiqaddan. Goobtu waxay muujineysaa miis loogu talagalay soo dhejinta 10 daqiiqo ee XRP ee ku Leu Moldova daqiiqad kasta. Ka eeg xogta sicirka sarrifka 10 daqiiqo shaxda ku taal boggan.
3.93 3.93 3.93 3.96 3.97 3.97 3.97 3.98 3.98 3.97
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Moldova ganacsiga saacadihii la soo dhaafay
Qiimaha sarrifka saacaddiiba boggayaga internetka. Kobaca XRP (XRP) illaa Leu Moldova saacaddan waa - 0.01 MDL. Qiimeyaasha XRP ee ku Leu Moldova saacad kasta waxaa lagu muujiyey jadwalka boggan ku yaal. Qiyamka XRP saacaddii ayaa miiska la dhigaa si ay ugu fududaato in la arko farqiga.
3.96 3.97 3.94 3.91 3.91 3.95 3.94 3.92 3.93 3.93
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Moldova arrimuhu maanta 18 January 2020
3.93 3.92 3.91 3.94 3.92 3.92 3.91 3.86 3.88 3.88